INONA NY FAHASAMIHAFANA MISY EO AMIN'NY KAONTY OUTLOOK & HOTMAIL? - MALEMY
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny kaonty Outlook sy Hotmail? Betsaka ny serivisy omen'ny Microsoft sy ny orinasa hafa mamela anao hifandray amin'ny tontolo ivelany. Ireo serivisy ireo dia manome anao fanavaozana momba ny tontolo ivelany momba ny zava-mitranga any amin'ny tontolo ivelany ary mamela anao hifandray amin'ny olon-kafa amin'ny alàlan'ny hafatra, mailaka ary loharanom-pifandraisana maro hafa. Ny sasany amin'ireo loharanom-baovao dia ny Yahoo, Facebook, Twitter, Outlook, Hotmail ary ny hafa koa izay mampifandray anao amin'ny tontolo ivelany. Raha te hampiasa ny iray amin'ireto serivisy ireto dia mila manao ny kaonty tsy manam-paharoa ianao amin'ny fampiasana solonanarana manokana toa ny id mailaka na nomeraon-telefaona ary mametraka teny miafina izay hitazona ny kaontinao ho azo antoka sy azo antoka. Ny sasany amin'ireo serivisy ireo dia tena ilain'ny olona ary ampiasain'ny olona amin'ny andavanandrony izany raha ny sasany kosa tsy dia ilaina loatra ary noho izany dia tsy ampiasain'ny olona maro.
Amin'ireo serivisy rehetra ireo, ireo loharanom-pahalalana roa mahafaritaka ny ankamaroan'ny olona dia ny Outlook sy ny Hotmail. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahita ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo ary ny ankamaroan'izy ireo dia mihevitra fa ny Outlook sy ny Hotmail dia mitovy ary tsy misy mahasamihafa azy ireo.
Raha ianao dia eo amin'ireo olona izay matetika misavoritaka eo anelanelan'ny Outlook sy Hotmail ary te hahafantatra ny tena fahasamihafana misy eo amin'izy ireo, dia aorian'ny famakiana ity lahatsoratra ity dia hazavaina ny fisalasalanao ary ho hainao tsara ny momba ny tsipika manify eo anelanelan'ny Outlook sy Hotmail.
Inona no atao hoe Outlook?
ny toe-tsaina dia mpitantana fampahalalana manokana novolavolain'i Microsoft. Izy io dia samy misy amin'ny ampahany amin'ny Office Suite azy ireo ary toy ny rindrambaiko tsy miankina. Ampiasaina amin'ny fampiharana mailaka izy io, nefa misy kalandrie, mpitantana andraikitra, mpitantana fifandraisana, fandraisana an-tsoratra, diary ary tranokala. Microsoft koa dia namoaka rindranasa finday ho an'ny ankamaroan'ireo sehatra finday ao anatin'izany ny IOS sy Android. Ny mpamorona dia afaka mamorona rindrambaiko manokana izay miasa miaraka amin'ireo singa Outlook sy Office. Ho fanampin'izany, ny fitaovana Windows Phone dia afaka mampifanaraka saika ny angona Outlook rehetra amin'ny Outlook Mobile.
Ny sasany amin'ireo fiasa amin'ny Outlook dia:
Inona ny atao hoe Hotmail?
Hotmail dia naorin'i Sabeer Bhatia sy Jack Smith tamin'ny taona 1996. Nosoloin'i Outlook.com tamin'ny 2013. Izy io dia sehatr'asa webmail, fifandraisana, asa ary serivisy fananganana kalandrie avy amin'ny Microsoft. Izy io dia heverina ho toy ny serivisy webmail tsara indrindra eran'izao tontolo izao taorian'ny nahazoan'i Microsoft azy tamin'ny 1997 ary nandefa azy ho MSN Hotmail i Microsoft. Nanova ny anarany imbetsaka i Microsoft nandritra ny taona maro ary ny fanovana farany dia nomena anarana hoe Outlook.com avy amin'ny serivisy Hotmail. Ny kinova farany dia navoakan'i Microsoft tamin'ny taona 2011. Hotmail na farany Outlook.com no mitantana ny fiteny famolavolana Metro novolavolain'i Microsoft izay ampiasaina ihany koa amin'ny rafitra fiasan'izy ireo- Windows 8 sy Windows 10.
Tsy ilaina ny manana rafitra miasa Windows mba hampandehanana ny Hotmail na Outlook.com. Azonao atao ny mihazakazaka Hotmail na Outlook.com ao amin'ny tranonkala rehetra misy ny rafitra miasa. Misy ihany koa ny rindranasa Outlook izay ahafahanao miditra amin'ny kaonty Hotmail na Outlook.com mamorona telefaona, takelaka, iPhone sns.
Ny sasany amin'ireo fiasa amin'ny Hotmail na Outlook.com dia:
Fahasamihafana eo amin'ny Outlook sy Hotmail
Araka ny hitanao etsy ambony fa ny Outlook dia tena hafa amin'ny Hotmail. Ny fomba fijery dia ny programa mailaka an'ny Microsoft raha i Hotmail kosa dia ny Outlook.com izay serivisy mailaka an-tserasera ananan'izy ireo.
Amin'ny ankapobeny, ny Outlook dia ilay rindrambaiko ahafahanao mizaha ny kaonty mailaka Hotmail na Outlook.com anao.
Ireto ambany ireto ny fahasamihafana nomena eo amin'ny Outlook sy Hotmail mifototra amin'ny antony sasany:
Ny fomba fijery dia mailaka azo ampiasaina na amin'ny rafitra miasa na windows na mac na Hotmail na Outlook.com kosa dia serivisy mailaka an-tserasera izay azo idirana avy amin'ny fitaovana misy amin'ny navigateur web na Outlook mobile app.
Ireo kinova vaovao an'ny Outlook dia noforonina tamin'ny fomba izay toa madio kokoa noho ireo kinova taloha.
Outlook.com na Hotmail dia nohatsaraina tamin'ny endriny taloha ary amin'ny volana ho avy dia havaozina amin'ny endrika vaovao sy fanatsarana fahombiazana, fiarovana ary fahatokisana ny Outlook.com. Ny kaonty mailaka an'ny Outlook.com dia mifarana amin'ny @ outlook.com na @ hotmail.com
Hotmail dia tsy serivisy mailaka intsony fa ny adiresy mailaka @ hotmail.com dia mbola ampiasaina.
Hotmail na Outlook.com dia manome safidy maromaro hitazomana ny boaty fampidiranao. Ny mailaka rehetra dia milahatra araka ny lahatahiry. Ireo lahatahiry ireo dia tena mora idirana sy ampiasaina. Azonao atao ihany koa ny misintona sy mandatsaka ireo mailaka ao anaty sy eo anelanelan'ny lahatahiry haharaka azy ireo. Misy sokajy hafa azonao omena hafatra ary ireo sokajy ireo dia miseho eo amin'ny sisiny.
I Outlook, etsy ankilany, dia toy ny serivisy Microsoft hafa izay manome anao safidy hamoronana rakitra mailaka vaovao, hanokafana rakitra, hitahiry rakitra, hijerena ireo rakitra, karazana endritsoratra samihafa hanoratanao rakitra ary endri-javatra maro hafa.
Outlook dia mamela anao amin'ny tahiry 1Tb hatramin'ny voalohany. Tena fitehirizana goavambe izany ary tsy ho lany mihitsy ianao na handrava na dia ambany aza ny fitehirizana. Mihoatra lavitra noho izay atolotry ny Hotmail na Outlook.com hatrizay. Raha lany ny tahiry azonao atao dia azonao atao koa ny manatsara ny fitahirizanao ary koa maimaimpoana.
Samy manana endrika fiarovana mitovy ny Outlook sy ny Hotmail na ny Outlook.com izay ahitana ny fizotran'ny fanamarinana singa marobe, ny fisie mandroso ary ny mailaky ny mailaka, ny fitantanana ny zon'ny antontan-taratasy Visio ary ny fahaiza-manaon'ny admin manokana ahafahan'izy ireo mamantatra vaovao mafampana. Mba hahatonga ny fifanakalozana fampahalalana ho azo antoka kokoa, ny rohy mankany amin'ny fonosana dia alefa fa tsy ny rakitra apetaka.
Raha te hampiasa Outlook dia tsy maintsy manana adiresy mailaka ianao. Etsy ankilany, Hotmail na Outlook.com manome anao adiresy mailaka.
tsy misy feo ao amin'ny google chrome windows 10
Noho izany, avy amin'ireo fampahalalana rehetra voalaza tetsy aloha, dia nanatsoaka hevitra fa ny Outlook dia programa mailaka raha ny Outlook.com izay fantatra taloha hoe Hotmail dia serivisy mailaka an-tserasera.
Manantena aho fa nanampy ity lahatsoratra ity ary azonao lazaina mora foana izao Fahasamihafana eo amin'ny kaonty Outlook sy Hotmail , fa raha mbola manana fanontaniana momba an'ity torolàlana ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
dns server dia tsy mamaly ny fikandrana windows 10
windows 10 esory ny fiarovana fiarovana
bluescreen irql tsy ambany na mitovy
windows 10 very fifandraisana Internet tsy tapaka 2018
ity app ity dia tsy afaka manokatra windows 10